Hisy ho lasa adala mihitsy!
2009-04-26 @ 20:17 in Politika
Mampieritreritra ihany ny toe-java-misy ka mila fitandremana tsara! Fanintelony izay no notafihina miaramila ny trano misy ny radio mada sy ny radio fahazavana. Ny fanafihana voalohany dia fisavana fotsiny ihany. Mikaroka ny fitaovan'ny radio mada tao amin'ny trano misy ny radio mada sy ny radio fahazavana izay mifanolo-bodirindrina amina trano iray ho an'izay tsy mahalala tsara ny toerana. Marihina fa na izaho aza, araka ny fitadidiako, dia indray mandeha ihany koa no niserana tany amin'io toerana io. Tsy natoky loatra ny fisian'ny fitaovan'ny radio mada tao amin'io toerana io ry zareo ka dia lasa fotsiny. Ny fanafihana faharoa no nandraofana ny fitaovan'ny radio sy tele mada, tsy azoko loatra na noraofina ny an'ny radio fahazavana tamin'io fotoana io na tsia fa ny fihainoko azy aloha dia novonoina tsy haneno ny radio fahazavana aloha. Somary naka kely ny fanaon'ny radio mada ny radio fahazavana tao anatin'ny fotoana fohy ary nampanantena sy nampitondra hafatra sahady ny teknisiana tao amin'ny radio mada fa eo am-pikarakarana ny famelomana ny radio indray ry zareo.
Nionona tamin'ny radio fahazavana tokoa aloha ny mpitolona sady tsy henon'ny mpitolona mitsipaka ny fanjakana nalaina an-keriny loatra ny fahabangan'ny radio mada. Mbola afaka nivory teo an-kianjan'Ambohijatovo mihitsy manko ry zareo tamin'io fotoana io. Inona tokoa? tsy ampy roa andro dia niverina tamin'ny laoniny tokoa ny radio mada. Lasa ny saina : naverina ve ny fitaovan'ny radio mada? Tsia, fitaovana vaovao indray no nampiasaina nanomboka tamin'io fotoana io. Hafaliana ny an'ny mpitolona satria hita ho hery lehibe tokoa ny fisian'ny radio, indrindra fa efa nanomboka amin'izay ny fandrarana tsy hidirana intsony ao Ambohijatovo. Nahavita hetsika aza ny mpitolona ka ny tena avahana amin'izany dia ny diabe nataon'ny vehivavy legalista niala avy teny Ambatoroka ho eny amin'ny lapan'i Mahazoarivo. Naharomotra ny miaramila sasany iny karazana fahombiazana iny na dia mbola anjatony metatra miala ny lapa aza no nisy ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna.
Raikitra indray ny fanafihana fanintelony ny trano fiasan'ny radio mada sy ny radio fahazavana teny Faravohitra. Noraofina avokoa indray ny fitaovana rehetra tao na ny an'ny Fahazavana na ny an'ny Mada. Izay tsy voaroaka dia nopotehina... mazava dia mazava ny tanjona dia ny hamotehina tanteraka ny tolona, hisaritaka tsy mahalala izay tokony atao intsony ny olona, samy hanao izay tiany atao noho ny fisaratsarahana ary dia halemy na tafiditra amin'ny herisetra hiandrasana kendritohina izay rehetra mbola sahy mijoro na dia nivandravandra aza ny fampihorohoroana tsy hiserantserana an-dalambe sao matimaty foana eo. Io no kihondalana nandrasana tamin'ny mpitolona, ary nahatonga ny tompon'andraikitra ambonin'ny filaminana nampitandrina ny "mpankorontana" izay tiana hotondroina ho mpitifitifitra olona an-dalambe nampitandrina mialoha tao amin'ny televiziona nasionaly. Rehefa miditra herisetra manko ny mpitolona dia afaka mampiasa basy soa aman-tsara, araka ny eritreriny, ka izay maty na maratra voatifiny dia voa noho ny "herisetra" nataony fa tsy noho ny tolona hampanjakana ny demaokrasia. Mpanao tetikady mahery vaika tokoa ry zareo aryhita ihany ny maha-manamboninahitra azy ireo. Niara-nopotehina ny radio mada sy ny radio fahazavana dia tsy hisy intsony ny mpampita hafatra sy toromarika hiarahan'ny mpitolona. Indrisy, mbola diso hevitra ihany ny mpitondra tetezamita. Samy nitsangana tamin'ny maty indray ireo radio roa tonta ireo, tsy naverina tsy akory ny fitaovana nalaina teo fa mbola misy fitaovana hafa ihany no nampiasaina indray, ora vitsivitsy fotsiny no nisaina dia injao henonao indray ny feon'ireo radio ireo. Hisy ho lasa adala eto marina, hoy aho anankampo, tsapako fa nitsiky naneso! Robao foana leity fa misy vaovao mitsangana foana eo a! Na dia hanadrohadroana ny "tetezamita" fotsiny aza.
Na izay aza dia efa misaritaka hatrany ny mpitolona raha vao maty ny radio mada indrindra fa ny sabotsy alina syny alahady maraina. Izaho kosa nahalala avy hatrany fa amin'ny andron'ny tolona ihany no tena hampiasana azy, ary mety hisy aza ny ora tsy handehanany dia tsy hanahy aho... naato tsindraindray ny fampielezam-peo hakan'ny mpiasa ao aminy aina e! Efa hitako sahady aza fa na dia ho tratra indray aza ireo fitaovana ireo dia mbola hisy hafa indray hijoro ho radio mada. Ho ela velona ilay radio mety hahalasa adala ireto tsy tia ny hampielezany feo nefa ny ady seza any amin-dry zareo mbola mafotaka dia mafotaka ihany koa e! Hatramin'izao aloha aho dia mampirisika ny rehetra tsy hiditra herisetra mihitsy aloha fa io no tena andrasany avy amintsika. Aleo ny samy miaramila ihany no hifampitady eo avy eo fa tsy maintsy hisy foana ny tsy hahatanty intsony ny fandripahana vahoaka ataon'ny miseho azy ho tsy tratran'ny aloka amin'izao fotoana izao.
Etsy andanin'izany, dia tsikaritro mihitsy amin'ny manodidina ahy sasany (fa tsy izay rehetra tsy mitovy hevitra amiko velively no ambarako etoana) fa misy dia misy (sivily izy ireo) ny maniry mihitsy ny handripahana ny mpitolona amin'ny alalan'ny toraka grenady be dia be dia tsy ho afa-mihetsika intsony izay sisa miangana. Aza maniry loza ho anay indrindra re fa tsy mety izany e! Raha izaho manokana, tsy naleo ve nivory isan'andro tao Ambohijatovo fotsiny ny mpitolona fa mety ho reraka tao fotsiny? sa hita ho miahamahazo hery sy mihamahazo vahana dia naleo kantsanana. Efa tsy nahomby ny fampanginana radio nataonareo, ary manantena hatrany izahay fa hisy vaovao hitsangana hatrany eo na dia ho tratranareo aza izay niasa tamin'iny fotoana iny dia hisy mandrakariva ny fifandaminana dia ho aiza izany ny lalankalehanareo? Fantatro tsara mihitsy fa mbola tsy afaka miritarita ny SADC amin'izao fotoana izao satria mbola tanaty fifidianana i Afrika Atsimo ary mbola ho avy ny fanendrena filoham-pirenena vaovao any aminy, fa rehefa tontosa tsara izany fotoam-pifidianana any Afrika Atsimo izany dia inona no hataonareo?
jentilisa, 26 avrily 2009 amin'ny 22: 18